China Hot ire BTO 22 agụba barbed waya factory na suppliers | Jinshi
1-1 Y biputere
1-3 Ubi Vine Trellis Biputere
1-4 Egwuregwu Egwuregwu Electric
1-6 Ezi Ọdụ Post
1-8 Post okpu na akwa akwa
1-9 Ground ịghasa
1-10 akara akara
2-1 Ogige ubi
Ogwe osisi 2-2
2-3 Tomato onu
2-6 Nkwado osisi
2-7 Ngwakọta Waya
2-8 Ogige waya nko
2-9 Ogige aka mgbodo
2-10 SOD isi
2-11 oche oche
2-12 Ngwaọrụ ubi
3-1 ọnụ ụzọ ámá ọhụrụ zealand
3-12 Ogige Nsu
3-2 Live yard yard
3-3 Chain ntupu ọnụ ụzọ ámá
3-4 Weldedesh ntupu ọnụ ụzọ
3-6 encenyịnya Nsu
3-7 Ugbo Ugbo
3-8 Chebe Railgbọ okporo ígwè
3-9 Ogwe Ehi
4-1 waya nwere ogwu
4-2.Concertina Aguba Waya
5. Ngịga ọla
5-1 Weld nkịta ụlọ
5-3 Pet igwu egwu
5-4 Waya nkịta crate
5-6 ọnyà onu
5-7 Nchekwa onu
6-1 Gabion igbe
6-3 Gabion Ngịga
6-2 Wepụtara Gabion
6-4 Gabion Nkata
7.Wire ntupu Series
7-1 Silt Senti
7-2 eriri igwe ntupu
7-4 Euro ngere
7-5 Ogige Ubi
7-6 welded waya ntupu
7-7 Igwe anaghị agba nchara waya ntupu
7-8 Crimp waya ntupu
7-9 gbasaa Metal mpempe akwụkwọ
7-10 Hexagonal Waya Netting / Chicken ntupu
7-11 Chain Link ngere / Diamond Waya ngere
8-1 PC isi 50cm
8-2 PC isi 60cm
8-3 PC isi 30cm
8-4 PC isi 25cm
8-6 SS isi efere
11-1 Black Ejiri Waya
11-2 kpaliri Iron Waya
11-3 Hot-tinye kpaliri Iron Waya
11-4 Waya Staright Bee
11-5 ịkwanyere ntekwasa Iron Waya
11-6 U Wiredị Waya
11-7 Obere eriri igwe Waya
12. ọkpụrụkpụ Mezie
14. Pest Control
14-1 Mouse Afia
14-2 agwọ Tong
Metal mpịachi ogige ngwaọrụ ...
4pcs / mkpọ eyi Bag ngwugwu 30 ...
Rusụlụ Rats Egburu Onye Na-ejide ...
Ntụ ntụ mkpuchi mkpuchi gburugburu Groun ...
Anwụ ngwa ngwa Chain Link Gate ...
Hot ire BTO 22 aguba waya nwere ogwu
Agụba waya nwere ogwu, nke a makwaara dị ka waya na-akpụ akpụ, bụ ụdị ngwaahịa netịpụtara na-echekwa nchebe echekwara yana ike iche iche. A na-eji ogwu na-amị nkọ dị nkọ ejiri ụdị mma abụọ, nke mara mma ma na-ajụ oyi. Egwuru ezigbo utịp utịp. N'otu oge ahụ, ngwaahịa ahụ nwere uru nke ọdịdị mara mma, nsonaazụ mgbochi na-arụ ọrụ nke ọma yana ihe na-adaba adaba. N'ihi na agụba ahụ dị nkọ ma sie ike imetụ ya, ọ nwere mmetụta ụfọdụ na-egbochi ya. A na-ejikwa waya agụba agụba. Enwere ike iji ya maka nchebe nke mgbidi ndị bi na ya ma enwere ike iji ya maka ogige. The barbed waya nwere mma mgbochi-ezu ohi mmetụta karịa ndị nkịtị barbed waya, na price adịghị elu, otú agụba waya nwere ogwu na-eji na ọtụtụ ebe na-eji. ngwaahịa na nchedo mepụtara na ike iche iche.
Zipu email Budata
Iron Waya, kpaliri, igwe anaghị agba nchara
Barbed Waya eriri igwe
Eriri igwe ogologo:
Eriri igwe dayameta:
450mm, 730mm, 960mm
Eriri igwe ibu:
5000 Ibe / iberibe kwa izu
Mmiri àmà akwụkwọ n'ime na kpara akpa n'èzí
Ibu (Mita) 1 - 2000 2001 - 5000 > 5000
Est. Oge (ụbọchị) 7 12 Ndi kpakorita
Waya Concertina / waya agụba
Nkọwapụta ewu ewu:
Ihe ； kpaliri, SS304, SS304L, SS316, SS316L eriri igwe arọ: 7-20kg eriri igwe dayameta: 450mm, 730mm, 960mm, 980mm. Ogologo nkpuchi: 8-50m
Aguba waya uru:
1. Ike mgbochi ịrị elu na mbibi mbibi dị elu. 2, nwere njirimara mara mma, nke bara uru, nke dabara adaba
njem na ntinye. 3. E kwesịrị ime ka ala ahụ gbanwee mgbe ị na-etinye ya, na ọnọdụ njikọ ya
na kọlụm nwere ike idozi ya na ala ka ala na-ada ma daa. 4. gbakwunye isi ekwe anọ na ntanetị nke ọdụ ụgbọ elu ọdụ ụgbọ elu, ebe ọnụahịa zuru oke anaghị abawanye nke ukwuu, ike net na aesthetics na-abawanye ụba. Ọ bụ otu n'ime ewu ewu n'ụlọ na mba ofesi.
Gbasara Anyị :
Hebei Jinshi ejedebeghị dị ka ọrụ nke na-ahụ maka ịmịpụta na mbupụ usoro nke Razor Barrier ngwaahịa.
Isi obodo edebanyere aha bụ CNY20.5Million. Companylọ ọrụ anyị aghọwo ihe zuru oke na ndị ọrụ 200. Hebei Jinshi Limited abụrụla
gafere asambodo ọkọlọtọ nke ISO9001: 2000Ihe njikwa ọkọlọtọ ọkọlọtọ mba ụwa. Usoro nke ngwaahịa Razor nwere
emere SGS nkwado nke ọkọlọtọ. Akara "Baffo" nke ụlọ ọrụ anyị ka a họpụtara dịka "Provincial Famous Trade Mark"
site na Mpaghara Hebei. Hebei Jinshi Limited isi ngwaahịa: Electric kpaliri Aguba ntupu, Hot Itinye kpaliri Aguba ntupu, ịkwanyere ntekwasa
Aguba ntupu na igwe anaghị agba nchara Aguba waya, nile di iche iche waya nwere ogwu
Ngwugwu na nbudata:
1. Mmiri àmà akwụkwọ + Kpara akpa maka kwa mpịakọta. Mgbe ahụ 50 coils kegide 1 ùkwù 2. N'elu ngwugwu ahụ 1 ton / pallet
Wiredị ndị ọzọ reazor waya:
Nke gara aga: Ogologo ire ere 100 cm Elu kpaliri Helix Pole Anchor
Osote: Factory hotselling aguba waya BTO 22 pịnye elu nche aguba waya
11 afọ factory ozugbo ere BTO ụdị aguba ...
Military Use igwe anaghị agba nchara Cbt 65 Aguba Barbe ...
High Tensile kpaliri Concertina Aguba Waya
Popular BTO 22 ụdị aguba waya elu àgwà con ...
36 "1 eriri igwe 25 ụkwụ kwa Roll Aguba Waz ...
Rasiermesser Stacheldraht, Aguba waya nwere ogwu
ỌZ FREE KWES FREER FREE N'FREELỌ +86013931128991
Adreesị Ianlọ Tianlin, Shijiazhuang City, China